Filimkani wuxuu kaa wargelinayaa arimaha qaxoontiga ee jarmalka. wuxuu kahadlayaa waraysiga xafiiska qaxootiga ee jarmalka. waraysigu waa wadahadal lagugu weydiinayo sheekadaada qaxootinimo. waana xubinta ugu muhiimsan qofkasta oo magan-gelyo doona. maxaa yeelay waxaa kuxidhan aritan in lagu aqoonsado iyo in lagu diido.
Viedeo.gan waad isticmaali kartaa’waanad sii gudbinkartaa’qofwalba oo ka faa’idaysan karana waad tusi kartaa. afar iyo toban luuqadood ayaad kuheli kartaa. cinwaanka links.ka ee xarumaha ayaa kuxusan bogan soo socda. filimkani mageli karo kaalinta talobixiyaha arimaha sharciga, laakiin wargelin koowaad ayuu noqon karaa. cida filimkan samaysay waxaad toos ugala xidhiidhi kartaa cinwaanka boga “tabaruc“.